Sunday January 07, 2018 - 22:17:34 in Maqaallo
Wax akhrisku qofkii caado ka dhigtaa waxuu noqdaa qof ka aragti dheer dadka aan waxba akhrisan, waayo waxa maskaxdiisa ku jira macluumaad fara badan oo nololo kala duwan soo maray. Mar kasta oo arrin loola yimaado in uu ka talo bixiyo, wuxuu taladiis
Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil oo ka hadlayey muxaadaro ku saabsan cilmiga ayaa sheegay hadal nuxurkiisu ahaa” laba arrimood ayey bulshooyinku isku dhaafeen. Kow, in maskaxda marka hore macluumaad badan lagu shubo (Wax akhris), ka dibna wixii la soo gudboonaada ay awood u yeelato inay xaliso. Laba, in maskaxda la adeegsado intii suurtogal ah, oo wakhti badan la siiyo inuu qofku kaga baaraandego naftiisa horumarkeeda iyo dib u dhaceeda.” Maanta waxa aynu ku jirnaa wakhti lagu magacaabo "Information Age” wakhti macluumaad, oo ay meel kasta qulqulayaan aqoon iyo macluumaad kala duwan, lana heli karo haddiiba loo baahdo.
Markii Nebi Maxamed”SCW” la faray wax akhriska oo lagu soo dejiyey suuradii ugu horaysay ee IQRA, Ilaahay "swc” wuxuu sidoo kale ummaddiisa ugu mano sheeganayaa oo yiri ”Insaanka waxa aanu barnay wax aanu aqoon u lahayn”.
Qoraalkii ugu khayrka badnaa wuxuu ahaa qoraalkiiQur’aankaKariimka ah, waxaana la qoray wakhtigii Cismaan Binu Caffaan. Sidoo kale wax akhrisku ugu khayrka badani waa Kitaabka Alle.